Chelsea Oo Sterling Iyo Dembele Kala Dooratay, Go'aanka Barcelona Ee Kounde & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa - GOOL24.NET
Chelsea Oo Sterling Iyo Dembele Kala Dooratay, Go’aanka Barcelona Ee Kounde & Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa
Robert Lewandowski ayaa wali doonaya inuu ka tago Bayern Munich walow uu agaasimaha ciyaaraha kooxdaas ee Hasan Salihamidzic ugu safray halka uu joogo si uu ula qaato kulan uu ugu qancinayo inuu kooxda sii joogo. (Sky Germany)
Real Madrid ayaa kor u qaaday xiisaheeda garabka Man City ee Raheem Sterling xilli Barcelona iyo Chelsea ay indho-indhaynayaan xaalada xiddigaas. (Mirror)
Chelsea ayaa u dhaqaaqday heshiiska Sterling kaddib markii ay ku daashay Ousmane Dembele oo ay dhinacooda ka doonayaan PSG iyo Bayern Munich. (Sport – in Spanish)
Arsenal ayaa sii wadi doonta wadahadalada ay Man City kagala jirto saxeexa Gabriel Jesus oo ay sidoo kale isha la raacayaan xaaladiisa Tottenham iyo Man City. (Mail)
Real Madrid, Bayern Munich iyo PSG ayaa Newcastle kula tartamaya da’yarka weeraryahanka ah ee Hugo Ekitike oo ka tirsan Reims. (L’Equipe – in French)
Ekitike ayaa la filayaa inuu fasaxiisa xilli hore kasoo laabto si uu u dhammaystiro heshiiska uu ugu wareegayo Newcastle. (Chronicle)
Barcelona ayaa doonaysa saxeexa Jules Kounde balse aan rabin bixinta 60-ka Milyan ee euro ee ay Sevilla ku doonayso iibka 23 sano jirkaas. (Marca)
Brentford ayaan ka rajo dhigin inay sii haysato Christian Eriksen oo qaab xor ah ugu soo biiray suuqii January, Man United ayaa sidoo kale aad u xiisaynaysa. (90 Min)
Manchester United ayay tahay inay kala doorato saxeexyada daafaca dhexe ee Ajax ee Lisandro Martinez iyo garabka weerar ee kooxdaas ee Antony oo labaduba lasoo shaqeeyay Ten Hag. (Mirror)
Arsenal iyo Newcastle ayaa xiisaynaya khadka dhexe ee Napoli ee Fabian Ruiz oo heshiiskiisu dhacayo 2023. (Corriere dello Sport, via Mail)
Chelsea ayaa xiisaynaysa daafaca midig ee kooxda Lens ee Jonathan Clauss. (Goal)
Tottenham ayaa wadahadalo dheeri ah la yeelanaysa Middlesbrough oo ay ka doonayso daafaca midig ee Djed Spence oo xilli ciyaareedkii hore ka caawiyay Nottingham inay Premier League kusoo laabato. (Sky Sports)
Axel Witsel oo heshiiskiisii Borussia Dortmund xagaagan dhacayo ayaa ku biiraya Atletico Madrid. (Mundo Deportivo – in Spanish)
Wolves ayaa wadahadalo dheeri ah galaysa si ay weeraryahan Gabriel Barbosa ugala soo wareegto Flamengo sidoo kalena Enzo Fernandez uga hesho River Plate. (90 Min)
Rangers ayaa iibin kartaa weeraryahan Alfredo Morelos haddii ay heshiis cusub ku fahmi waayaan xilli qandaraskiisii hore dhacayo 2023. (90 Min)
Manchester United ayaa rajaynaysa in Anthony Martial uu kooxda sii joogo xilli ciyaareedka dambe sababtoo ah inaysan jirin koox xiisaynaysaa. (Manchester Evening News)
Manchester United ayaa diyaar u ah inay 20 Milyan oo pound ku iibiso Martial balse mushaharkiisa ayaa baajinaya kooxaha saxeexiisa isku dayi lahaa halka ay 8.5 Milyan pound ku iibin karaa Eric Bailly oo lala xidhiidhinayo Newcastle. (Sun)
Manchester United ayaa ka fikiraysa saxeexa goolhayaha Watford ee Daniel Bachmann si uu kaabis ugu noqdo David De Gea maadaama Dean Henderson kusii dhawaanayo Nottingham oo amaah ku doonaysa. (Goal)